५५ प्रतिशत कोरोना भाइरस पादबाट सरिरहेको छ भन्ने विज्ञले दिएको यस्तो तथ्यबाट दुनियाँ चकित ! – Wow Sansar
काठमाडौ। विश्वभर महामारीका रुपमा रहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले हाम्राबीचमा धेरै कुराहरु कुराहरु ल्याएर आएको छ । यो के हो ? कसरी फैलन्छ ? रोकथाम गर्न के गर्ने ? यी अत्यन्तै महत्वपुर्ण प्रश्नहरु हुन् । किनभने मान्छेहरु आ–आफ्नै तरिकाले यी र यस्तै प्रश्नहको जवाफ दिदैंछन् । सामान्य रुपमा हेर्दा अहिले कोरोना भाइरस एक प्राकृतिक महामारी भएको बताइन्छ ।
तर यसमा सबैजना सहमत छैनन् । धेरैलाई लाग्छ कि यो त मान्छेहरुले बनाएको जैविक भाइरस हो । अहिलेसम्म हात मिलाउँदा, कसैसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउँदा, वा थुकको छिट्टाबाट पनि कोरोनाभाइरस फैलने डर हुन्छ । कतिपयले यो भाइरस कपडा, लगायत अन्य माध्यमबाट पनि सर्छ भन्दै आएका छन् । माक्स, लगाउँने, एक्लै बस्ने र आफ्नो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने भन्नेजस्ता तमाम कुराहरु रहेका छन् । सायद यसैलाई ध्यानमा राखेर नेपालका एकजना सांसदले महले कोरोनालाई भगाउन सकिन्छ भन्ने बयान दिनुभयो
उनले थप्दै्र भनिन, ‘तपाई खोकी वा हाच्छिउँ गर्नुहुन्छ, वा कडा सतहमा छुँदा तपाईको हातले मुख छोपेर खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा नजिकको व्यक्तिको सम्पर्कमा भाइरस आउँन सक्छ ।’ जे होस्, डा.। जार्विसले मानिसहरूलाई शौचालयको राम्रो सरसफाई राख्न आग्रह गरेकी छन् । यसरी पनि पादमा पनि भाइरस देखिएको प्रमाण फेला पर्न सक्छ । उनले भनिन, कोरोनाभाइरसको केहि रिपोर्टहरू पूमा अवस्थित छन् । खोकी र ज्वरोजस्ता अन्य लक्षणहरू प्राप्त गर्नु अघि एक वा दुई दिनमा एकपटक पखाला हुने १० जनामा ​​एक जना थिए । यसले बाथरूम सफा गर्ने सम्बन्धमा थप सावधानी अपनाउनुको महत्त्वलाई जोड दिन्छ भने यदि कसैलाई कोरोनाभाइरसका लक्षणहरू छन् भने अर्कोलाई यसरी पनि संक्रमण हुन सक्छ ।
सन् २००१ मा, अष्ट्रेलियाली डाक्टर कार्ल क्रुस्लेन्की र सूक्ष्म जीववैज्ञानीक ल्यूक टेनेन्टले एक प्रयोग गरी पादले रोग सार्न सक्छ कि भनेर पत्ता लगाएका थिए । डा. टेन्नेन्टले एक साथीलाई दुई सेन्टिमीटरको दूरीबाट सिधा भाँडामा पाद्न भन्यो यस्मा पहिले पाइन्ट लगाएर अनी त्यसपछि नलगाएर पाद्न लगाइएको थियो ।
तिनीहरूले फेला पारे कि पहिलो पेट्री डिश सफा नै रह्यो, जबकि दोस्रोलाई ब्याक्टेरियाहरू रातभरि अंकुरित रहेको देखियो तर परीक्षणमा पाइएका ब्याक्टेरिया हानिकारक थिएनन् । यस वर्षको सुरूमा, चीनको रोग नियन्त्रण एवं रोकथाम केन्द्रले घोषणा गर्‍यो कि प्यान्ट कोरोनोभाइरस बोक्ने मुसा विरुद्ध प्रभावकारी अवरोध हुनुपर्दछ ।
यदि तपाईलाई चिसो कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षणहरू छन् भने, तपाईं अरूलाई बचाउन मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ र बिरामी हुँदा घर भित्र रहँदा अरूसँग हुने अनावश्यक सम्पर्कबाट बच्न सक्नुहुन्छ । तपाईंले आफ्नो मुख र नाकलाई टिशूले कभर गर्नुपर्दछ । जब तपाईं खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्नुहुन्छ । त्यो बेला प्रयोगपछि उक्त टिशुलाई टाढा फाल्नुहोस् र आफ्नो हात राम्रोसँग धुनुहोस् । तपाईंले छुनु भएको वस्तुहरू र सतहहरू सफा र डिसइन्फेक्टिंग पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
कोरोनाको बेला सिमकार्ड र वाइफाइ निःशुल्क हुने